दलान नेपाल : सप्तरीको भारदहमा के भयो - त्याहा पुगेका अधिकर्मी दिपेन्द्र झा भन्छन - म्याचिकने विहारी भन्दै मधेशी माथी गोली चलाइयो ।
सप्तरीको भारदहमा के भयो - त्याहा पुगेका अधिकर्मी दिपेन्द्र झा भन्छन - म्याचिकने विहारी भन्दै मधेशी माथी गोली चलाइयो ।
at 12:05 AM Posted by Dalan
मधेशी मोर्चाले आब्हान गरेको अनिश्चितकालिन मधेश बन्दको क्रममा हिजो मंगलवार विहानै देखि सप्तरीको भारदह क्षेत्रमा तनाव सिर्जना भयो । प्रर्दशन उत्रेका मधेशीहरु माथी प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाए । गोली लागेर राजीव राउतको तत्कालै मृत्यू भयो भने २० जना भन्दा वढी अहिले अस्पतालमा उपचार गराई रहेका छन । आज विहान सप्तरीको भारदह पुगेका मधेशी अधिकार्मी दिपेन्द्र झा त्याहा वाट दलानलाई त्याहाको अवस्था वारे यसरी टिपोट गराए ।
भारदहाका एक गाउलेले प्रहरीले चलाएको गोली देखाउदै । तस्वीरहरु - दिपेन्द्र झा
हिजो मंगलवार विहानै देखि सप्तरीको भारदहमा मधेशी पार्टीहरुको नेताहरु सडकमा धर्ना दिएर आफनो आन्दोलनलाई अगाडी वढाईरहेको देखिन्छ । जसको नेतृत्व शैलेन्द्र साह, दिनेश साह लगायतका स्थानिय नेताहरुले गरीरहेका थिए । सडकमा धर्नामा बसेका नेताहरुलाई एक्कासी पछाडी वाट आएर प्रहरीले अन्धाधुन्द कुटपिट गरेको देखिन्छ । सैलेन्द्र साह र दिनेश साह अहिले पनि अस्पतालमा सिकिस्त रुपमा उपचार गराईरहेका छन ।
प्रहरीले आफनो चौकीको छत माथी गएर गाउले हरु माथी अन्धाधुन्द गोली चलाएको देखिन्छ । राजीव राउत एउटा समान्य किसानको छोरा थियो । उनको छाती मा सिधा गोली प्रहार गरिएको देखिन्छ । उनको दुई ओटा बच्चा छ । एउटा तीन महिनाको र एउटा २ बर्षको । म अहिले राजीव राउतको घरमा उनको बुबा र परिवार संग कुराकानी गर्ने याहा आएको हू । याहा प्रहरीले लाई वुलेट अर्थात फलामको गोली चलाएको देखिन्छ । गाउमा जताजतै गोलीको छर्राहरु लागेको त्यतीकै देखिन्छ । एउटा गोली त दुई ओटा बास सम्मलाई छिरेर अघि वढेको देखिन्छ । गाउमा रहेको मिलहरुको मिटरमा गोली लागेको देखियो । याहा गाउलेहरु संग कुरा गर्दा प्रहरीहरुले उनीहरुलाई म्याचिकने विहारी भनेर गाली गर्दै कुटपिट गरेका रै छन । म केही वेर अघि मात्रै दिपक साह र विजय ठाकुर भन्ने युवाहरु संग कुरा गरेका छौ । यी दुवै याहाका एमालेका स्थानिय नेता हुन । तर यीनीहरु समेत गोली लागेका छन । दिपक र विजय संग कुरा कुरा गर्दा नै उनीहरुले सुनाए कि प्रहरीले गाउलेहरुलाई म्याचिकने विहारी भन्दै कुटपिट गरेका थिए ।
भारदहको मिल भित्र लागेको गोलीको चिन्ह
हिजो देखि नै केही सन्चार माध्यमहरुले प्रर्दशनकारीहरुले प्रहरी चौकी र प्रहरी माथी आक्रमण गरे पछि प्रतिरक्षामा फायर गरेको समाचारहरु प्रकाशित गरेको देखिन्छ । आज कान्तिपुरले समेत त्यही फोटोलाई प्राथमिकतामा राखेर छापेका छन । म यही वाट कान्तिपुर सहित सवै मिडियाहरुलाई चुनौती दिन चाहन्छू र याहा आएर त्यसको पुष्टि गरेर देखाउन च्यालेन्ज गर्न चाहन्छू ।
याहा आज विहानै भारदह पुग्दा आफनै देशको नागरिक प्रति प्रशासन यती निर्मम कठोर भएर प्रस्तुत हुन्छ भने म कहिल्यै सोचेको पनि थिईन ।
मृतक राजीव राउतकी कान्छी छोरी अर्या संग अधिकारकर्मी दिपेन्द्र झा
हिरालाल राउत - राजीव राउतको वुवा भन्छन -घर वाट निकालेर मलाई पनि निर्घात कुटपिट गरे-
छोरालाई गोली लागे पछि हामी उनलाई लिएर घर आयौ । त्यतीकै प्रहरीहरु फेरी घर भित्र छिरेर हामीहरु पनि निर्धात कुटपिट गरे । घरवाट वाहिर निकालेर सडकमा लगे अनि त्याहा पनि म संगै अरु याहाका मानिसहरुलाई निर्धात कुटपिट गर्यो । मेरो छोरो घरवाट खेत तिर जानका लागी निस्केका थिए । तर वाटोमा प्रहरीले उनलाई गोली हानेर मार्यो । उनको छातीमा यसरी गोली लाग्यो कि उनी त्यही निर ढल्यो ।
मृतक राजीव राउत
Unknown August 19, 2015 at 4:33 AM
Yo ta ati vo madhesi janta haruchup lagera basne chainan ra madges maraheka pahad mulka manis le yestobela saath dinai parcha
Paramendra Kumar Bhagat August 19, 2015 at 7:27 AM
सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा http://demrepubnepal.blogspot.com/2015/08/blog-post_439.html
CodeStars Nepal August 19, 2015 at 9:27 PM
Ek tarika le thik Manchu... Jasari madhesh andolan ko kram ma sappai pahad muluk ka manche lai chanda magdai vagayeko sabailau taha cha... Aba ahilay ko samaye ma madat magda na aauna sakcha... Galati bigat mai garisakela Chan... Nana thari party re... Goit samuha re... Madhesi tiger re... "Mar pahadiya ke" vaneko sabda ajha pani bela bela kan ma gunjincha..
Writer August 27, 2015 at 2:29 AM
Yadi bigat kai kura ma dhyaan diney ho bhaney .Rajneeti ra shadyantra le unmukt chanda wusuli ra pahadi mool ka terai ma basney nepali haru lai tehi udand samuha bata jogauna ra atmiyata bhawana failauna rajya le k garyo ? Ra tapailey Bhumigat samuha haruley gareko arajakta ra jaghanya aparadh lai "12 barsa ko monastic school ko student lai 5,6 jana shastra prahari ko Nirghat kutpit ,bhardaha, tikapur ko ghatna lai MEDIA le janata kai galti bhayeko bhanera dekhayeko lai -Nyaya bhayeko bhanera bhanna chahanu hun6a bhaney- tpai naboleko nai bes..
मधेसी जनता प्रति हेर्ने दृष्टिकोण , गर्ने व्यवहार , र घटिया सोचाईले गर्दा , आखीर कहिले सम्म मधेसी जनता शोषण,उत्पिडन,हेपिएर,मिचिएर बस्ने ????? आखीर कहिले सम्म ??????? होसीयार अब मधेसी जनता चुप लागेर बस्ने छैन , बिद्रोह को आगो दन्किदै छ । । खबरदार